Iindaba -Ukhetha njani ilaphu lempahla yangaphandle?
Zininzi iintlobo zamalaphu kwimpahla yangaphandle. Yeyiphi eyona ilungele wena?
Kukhetho lwamalaphu angaphandle, kukho imisebenzi emithandathu ebalulekileyo. Makhe sijonge ezi zinto zintandathu:
Inqanaba lokungena komoya lixhomekeke kubunzima bokujikeleza kwelaphu. Ukungena komoya yinto ebalulekileyo kuyo nayiphi na imisebenzi yangaphandle. Phakathi kwazo, okubaluleke kakhulu kukugubungela kunye nesihlalo. Kwiindawo ezivaliweyo kunye nezembozo, amalaphu angenawo umoya anokubangela ukungunda. Ukuhlala kwesihlalo, umqamelo ophefumlelweyo uya kuba lula ngakumbi, ungabambeleli kwisandla, ukhululeke ngakumbi ehlotyeni elishushu.
Ukuxhathisa kwamanzi ikakhulu kuxhomekeke ekubeni ingaba amanzi aya kujika abe ngamathontsi amanzi kwilaphu. Kodwa kukho inqaku, ukumelana kwamanzi kunye nokungena komoya yenye emva kwenye. Ngokubanzi, amalaphu anokungena komoya kakuhle amelana ngakumbi namanzi, afana nalawo angenakunyinyiswa, anje ngevinyl egqunywe okanye amalaphu alaminethiweyo. Ukungena manzi kubaluleke kakhulu kwi-awning, iimpahla ezingangeni manzi kunye nokuhonjiswa ngaphakathi kwe-yacht.
Ukuxhathisa ukunxiba kubhekisa kubuchule belaphu ukumelana nokunxiba phantsi koxinzelelo. Amalaphu asetyenziselwa ukuhambisa ngenqanawa kunye nokusetyenziswa kwangaphandle ahlala enzima, eqinile kwaye edla ngokugqunywa ngevinyl okanye ezinye iintlanzi. Oku ikakhulu kukufezekisa imbonakalo ethambileyo kunye nokuziva, kunye nokuphucula ukumelana nokunxiba.
Ukuxhathisa kwe-UV yeyona nto ibalulekileyo neyona ilula kakhulu kumalaphu angaphandle. Ukuphakama kokumelana ne-UV, kokukhona ixesha elide liyinkonzo yelaphu. Amalaphu amaninzi elanga abaluleke ngakumbi kunalawo omthunzi.
Ukuphakama kombala wokukhawuleza kwelaphu, kuya kuncipha ukuba ipateni iphele. Ukukhawuleza kombala welaphu kuxhomekeke kubuchule bayo bokugcina umbala ixesha elide elangeni, kwimvula nakwikhephu. Ukukhawuleza kombala yeyona nto ibalulekileyo. Nangona kunjalo, ukuba imibala eqaqambileyo isetyenziselwa i-awnings, ikhava, iimethi, njl., Ukukhawuleza kombala kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Ukuba ilaphu kufuneka lisetyenziswe ngobuninzi okanye libonakaliswe ngaphandle ixesha elide, ilaphu elinepateni eprintiweyo linokuphela ngokuhamba kwexesha.
Xa kuthelekiswa namalaphu angaphakathi, ucoceko lwamalaphu angaphandle lubonakala lungabalulekanga kangako. Kodwa kumalaphu angaphandle, ucoceko luya kuchaphazela ubomi benkonzo. Ucoceko, enyanisweni, kukususa ukungcola kwilaphu.
Ukuba ayicocwanga, ukungunda kuya kuhlala kwilaphu kwaye kuqhubeke nokukhula kubumdaka. Njengalelaphu linamacala-nye alicocekanga, ke olu hlobo lwelaphu kufuneka luhlawule ngokukodwa.